Word Mine 1.3.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.6 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား စကားလံုး Word Mine
Word Mine ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
The Tap And Knock Off (TAKO) - Series4game is here.
Introducing 'Word Mine',aset of brain teasers designed for all age groups. The goal of the game is to reveal the hidden answer by eliminating letter tiles from2to3words. As the levels progresses, the sequence of the knocked-off words should be rearranged to reveal the answer.
- Use hints to lock the tiles that should not be eliminated
- Drag and drop the knocked-off word to change its position to reveal the hidden answer
- Simple and interesting games
- Unlock Achievements as you progress
Start playing this exciting FREE word puzzle game, all you need isa'Tap'.
More features and levels will be added in future updates.
Invite your friends and play TAKO games for endless fun. It is TAKOTIME! For more details please visit our website www.thetakogame.com
အဆိုပါပုတ်ပြီးတော့ပိတ် Knock (Tako) - စီးရီး4ဂိမ်းကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။
'' သမ်မာကမျြးမိုင်း 'အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဦးနှောက်ကြော်ငြာအတိုတစ်ခုတွင်စုတခုမိတ်ဆက်ခြင်း။ ဂိမ်း၏ရည်မှန်းချက်23 မှစကားများရာမှစာတစ်စောင်အုပ်ကြွပ်ဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်ဝှက်ထားသောအဖြေကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆင့်ဆင့်ဖြစ်စဉ်များအတိုင်း, ခေါက်-ချွတ်စကားများ sequence ကိုအဖြေထုတ်ဖေါ်ဖို့ကျန်နေသေးရပါမည်။
- တစ်ဦး tile ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကိုအသာပုတ်
- က hidden အဖြေကိုထုတ်ဖေါ်ရန်၎င်း၏အနေအထားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အခေါက်-ချွတ်စကားလုံး drag and drop
- သင်တိုးတက်မှုအဖြစ်အောင်မြင်မှုများ Unlock
ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခမဲ့စကားလုံးပဟေဠိဂိမ်းကစားခြင်း Start ကိုသင်လိုအပ်သမျှတစ်ဦး '' ကိုအသာပုတ် '' ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုများသော features နဲ့အဆင့်ဆင့်အနာဂတ် updates များကိုထဲမှာထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Tako ဂိမ်းများကိုသင့်ရဲ့ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းသည်အဘယ်မှာရှိ Digio TwentyOne ဆက်သွယ်ရေး, အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြသည်။
သင်၏မိတ်ဆွေများ Invite နှင့်အဆုံးမဲ့ပျော်စရာအဘို့အ Tako ဂိမ်းကစား။ ဒါဟာ TAKOTIME ပါ! အသေးစိတ်ကိုကြှနျုပျတို့၏ website www.thetakogame.com သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး
Word Mine အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Word Mine အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Word Mine အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Word Mine အား အခ်က္ျပပါ
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 7
bds-store စတိုး 23.32k 11.34M
Word Mine ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Word Mine အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.3.6
ထုတ်လုပ်သူ Digio TwentyOne Communications
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://thetakogame.com/privacy-policy/
App Name: Word Mine
Release date: 2019-04-03 13:31:12
လက်မှတ် SHA1: 04:4D:02:C4:20:2B:E6:0E:62:43:2F:7A:5F:2A:D6:F3:73:9F:03:B2
Word Mine APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ